CodeBlocks: IDE miampita sehatra mahasoa, maimaimpoana sy malalaka, mety ho an'ny C sy C ++ | Avy amin'ny Linux
CodeBlocks: IDE miampita sehatra mahasoa, maimaimpoana sy malalaka, mety ho an'ny C sy C ++
Amin'ity taona ity, mbola manamafy izany raha ny fanadihadiana natao Fanadihadiana Stack Overflow Developer 2020 el Linux toerana 1 toy ny Sehatra tiana indrindra (tiana indrindra) of the Mpanamboatra lozisialy, na eo amin'ny sehatry ny Servers na eo amin'ny sehatry ny Operating System lehibe hampivelarana ny lozisialy.
Araka izany, Linux Matetika io no OS mety indrindra ho an'ireo mpampiasa za-draharaha sy mpankafy, mazoto na mpianatry ny Programming miasa na manomboka ny Dingana voalohany Eto amin'ity tontolo midadasika sy mahafinaritra ity Ary ho an'izay, Linux manome isan-karazany fampiharana sy fitaovana rindrambaiko mety amin'ny fianarana sy / na miasa amin'ity faritra ity, iray amin'izany ny iray Kaody :: sakana na tsotra kokoa CodeBlocks (satria hiantso sy hanoratra izahay manomboka eto).
Fonosana ho fanohanana ny fampandrosoana ny lozisialy amin'ny DEBIAN 10
Manalalina ny voalaza etsy ambony momba ny «isan-karazany fampiharana sy fitaovana rindrambaiko mety amin'ny fianarana sy / na miasa »eo amin'ny sehatry ny Fampandrosoana rindrambaiko amin'ny Linux, Manasa anao izahay hamaky aorian'ity famoahana ity ny fidirana teo aloha mifandraika amin'ilay lohahevitra, antsoina «Avadiho ho lasa Distro mety amin'ny fampandrosoana ny lozisialy ny GNU / Linux» amin'ny fipihana ny rohy etsy ambany avy hatrany etsy ambany:
Avadiho ho lasa Distro mety amin'ny fampandrosoana ny lozisialy ny GNU / Linux anao
Ary koa ireo 2 hafa etsy ambany:
Fampivoarana ny lozisialy: fanadihadihana ara-tantara mandraka ankehitriny
1 CodeBlocks: cross-platform IDE, maimaimpoana ary misokatra
1.1 Inona ny CodeBlocks?
1.2 Dikan-teny ankehitriny
1.3 Fanovana sy fampidinana
1.4 Ahoana ny fametrahana azy amin'ny GNU / Linux?
CodeBlocks: cross-platform IDE, maimaimpoana ary misokatra
Inona ny CodeBlocks?
Araka ny hevitry ny Tranonkala ofisialy CodeBlocks, voalaza toy izao manaraka izao:
"CodeBlocks dia C, C ++ ary Fortran IDE maimaimpoana namboarina mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpampiasa azy indrindra. Natao hamboarina sy azo alamina tanteraka. Farany, azo lazaina fa IDE izy miaraka amin'ireo fiasa ilainao rehetra, manana endrika ivelany sy fiasa tsy miova amin'ny sehatra rehetra".
Ary izany rehetra izany dia noho izany, CodeBlocks Naorina manodidina ny a rafitra plugin, izay mamela azy ireo hitarina. Ny karazana fiasa rehetra dia azo ampiana amin'ny alàlan'ny fametrahana / fanaovana fango plugin. Ohatra, fampandehanana sy fanafoanana ny fiasan'ny, dia efa nomen'ny plugins.
Hatramin'ny volana martsa, CodeBlocks dia manome ny ankehitriny kinova ofisialy marin-toerana ambanin'ny laharana 20.03, izay nisolo ny kinovan'ny nomerao 17.12 teo aloha. Izay azo natao taorian'izay maherin'ny 2 taona ny fivoarana ary maherin'ny 400 ny fanovana. Izany fotoana lava izany dia namela ny fampidirana fanatsarana maro, fanamboarana bibikely ary fiasa vaovao ilaina sy ilaina.
Ka hatramin'izao, CodeBlocks dia IDE fiampitana tsara indrindra, maimaimpoana ary misokatra, mety ho an'ny C, C ++ ary Fortran, izay manana fanohanana tsara ho an'ny mpanangona marobe (MinGW / GCC, Digital Mars, Microsoft Visual C ++, Borland C ++, LLVM Clang, Watcom, LCC ary Intel C ++ Compiler, eo ny hafa). Ary miorina amin'ny wxWidgets GUI sehatra.
Fanovana sy fampidinana
Ny tranokalan'izy ireo dia manolotra antsipiriany sy feno tatitra momba ny fanovana sy ny vaovao tafiditra amin'ity kinova vaovao ankehitriny ity, laharana 20.03, Amin'ny manaraka rohy. Ankoatra izany, CodeBlocks azo sintonina mora avy ao amin'ny fizarana fampidinana mitovy amin'ny fampiasan'ny antoko liana rehetra azy. Ary amin'ny tranokala ofisialiny ao Sourceforce manome safidy fampidinana hafa sy fampahalalana ilaina.
Ahoana ny fametrahana azy amin'ny GNU / Linux?
Amin'ny endriny midadasika sy azo ampiharina ary havaozina Wiki, ny fomba fametrahana isan-karazany. Na izany aza, na inona na inona Distro sy ny laharana kinova, dia azo apetraka mora foana izy io amin'ny alàlan'ny fametrahana fotsiny ireo fonosana 2 etsy ambany amin'ny fampiasana ny mpitantana fonosana safidinao, samy CLI como el gửi:
Na izany aza, noho ny fiankinan-doha na ny fampiasana, ireto fonosana manaraka voalaza matetika ireto dia manatsara ny fiasa sy ny fanohanan'ny CodeBlocks ary / na hafa IDE mitovy amin'izany, ka apetraho izay heverinao fa mety na tokony apetrakao:
naoty: Zava-dehibe ny mitadidy ao an-tsaina fa, na inona na inona OS ampiasaina, dia ilaina ny mametaka compiler, toy ny gcc na g ++, ho an'ny fahitana azy, fampiasana ary fiasa mety.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «CodeBlocks», izay IDE-cross-platform mahasoa, maimaimpoana sy malalaka, mety ho an'ny C, C ++ ary Fortran, satria efa Namboarina niaraka tamin'ny mpandahatra programa C ++, mba hanomezana toerana sy fampiononana tena tsara rehefa miasa miaraka amin'ity karazana fiteny ity; dia mahaliana sy mahasoa indrindra, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » CodeBlocks: IDE miampita sehatra mahasoa, maimaimpoana sy malalaka, mety ho an'ny C sy C ++
IDE tena tsara, tsy misy fialonana ny hafa ..
Geogebra Online dia hoy izy:
Valiny amin'ny Geogebra Online
Ny Linux fizarana sy ny fonosana Guix 1.2 dia efa navotsotra
Fedora 34 dia mikasa ny hampiasa PipeWire ho an'ny feo fa tsy PulseAudio